महिला असुरक्षित भएको मेरो देश – Fewa Times
प्रकाशित मिति: October 17, 2019 12:24 pm
– सबिता थापा क्षेत्री (पाल्पा)
जहाँ महिला सभामुख र महिला राष्टपति भएको देश नेपालमा महिला किन असुरक्षित…?
के अब महिला सधै कापि कापि डर त्रासमा बाँच्नु पर्ने हो…? दिन प्रतिदिन बडेका डरलाग्दा हटना बाहिरिदा पनि किन चुप छौ महिलाकर्मिहरु अनि किन मौन छ यो सरकार…? यसरि किन मौन रहन्छौ …?
म छोरि मान्छे हुँ मलाइ डर लागिरहेछ सबै कुरा जानकारि हुदा हुँदै पनि म किन डराहि रहेछु….? किन म सँग प्रशनको जबाफ छैन….? छोरि मान्छे भएर जन्म लिनु मलाइ आफुलाई घृ*णा लाग्छ।
डर लाग्छ मलाई
हिजो निर्मला पन्त जस्ता धेरै छोरि दिदी बहिनिहरुको बल*त्कार पछि ह*त्या भयो, ए*सिडको प्र*हार बाट आधि स*ङ्कटमय जिबन बाच्नु परेको छ, घरेलु हिँ*शाले महिलाको अकाल मृ*तु भैरहेछ । कतै भोलिका दिनमा म र म जस्तै दिदि बहिनिहरुको पालो त होइन….?
सबै जान्दा जान्दै पनि मौन छ सरकार अनि मौन छन हाम्रा महिलाकर्मिहरु। किन मौन छौ, के अब कुनै कडा नियम बन्दैन…? कित पैसाले चलेको हाम्रो देशमा हाम्रो आबाज कसैले सुन्दैन….?
दु*ख लाग्छ मलाई सबको बिरो*ध्ध आबाज उठाइयो तर दिन प्रतिदिन बडेको महिला हिँ*सा र घ*टनाका विवरण लुकाईयो ।
सचेत रहनु हाम्रा देशका दिदी बहिनि म लगायत तिमि आफैमा असुरक्षित छौ ।